Amasiko amaDashi ngoKhisimusi | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Las Amasiko namasiko amaDashi ngoKhisimusi ziyefana kakhulu nalezo zakwamanye amazwe asenkabeni nasenyakatho yeYurophu. Kodwa-ke inezici ezithile ezikwenza ihluke futhi ibukeke ikakhulukazi.
Kulokhu okuthunyelwe sizobuyekeza amanye amasiko ahlobene nemikhosi, izimakethe kanye nokudla okujwayelekile kwalezi zinsuku. Sijoyine kulolu hambo oluhehayo oluya e- UKhisimusi eNetherlands.
1 ISinterklaas, iDutch 'Santa Claus'
2 Izimakethe zikaKhisimusi nemihlobiso eNetherlands
3 Amasiko amaDashi ngoKhisimusi etafuleni
ISinterklaas, iDutch 'Santa Claus'
Ngokungafani nomhlaba wonke, eNetherlands usuku olubaluleke kunazo zonke ezinganeni yilolu Disemba 5. Yilolo usuku, amasonto amathathu ngaphambi kukaKhisimusi, lokho Sinterklaas (UNicholas oNgcwele) ubalethela izipho zakhe.
Noma kungashaqisa kanjani, inganekwane inakho lokho USinterklaas uhlala eSpain phakathi nawo wonke unyaka. Kepha akaphuthelwa usuku lwakhe lukaKhisimusi nezingane zaseDashi, ehamba ngesikebhe aye eHolland ebandayo ngesikebhe esigcwele izipho nezimanga.
Ukufeza umsebenzi wakhe, uSinterklass unosizo lwenceku yakhe, I-Zwarte Piet (Pedro el Negro), owaziwa nangokuthi I-Sooty piet o I-Roetpiet (Pedro Hollin noma uPedro de la Chimney).
Ukufika ethekwini (unyaka ngamunye khetha okwehlukile) yisikhathi esijabulisayo, futhi njengenye yamasiko athandeka kakhulu amaDashi ngoKhisimusi. Imindeni iyagcwala ethekwini. Lapho uSinterklaas nowakhe pieten ("ama-pedros" abo) abeka unyawo lwabo phansi, izinsimbi zesonto ziqala ukukhala futhi izingane zaqhuma ukumemeza kwenjabulo.
Lapho izingane ziyolala, uSinterklaas uzohambela amadolobha nezwe lonke ngehhashi lakhe elimhlophe. Uzoshiya izipho namaswidi ezinganeni ebezilungile; uzofaka abantu ababi esakeni bese ebahambisa eSpain.
Uma konke lokhu kwenzeka ngobusuku bukaDisemba 5-6, kuthiwani nge- Usuku lukaKhisimusi eHolland? Isidlo sakusihlwa sigujwa njengomndeni, kepha njengoba abancane sebethole izipho zabo emasontweni edlule, manje sekuyithuba labantu abadala. Kodwa-ke, iyanda imindeni lapho uFather Christmas noma uSanta Claus (eNetherlands bambiza khona UKerstman) futhi kwenzeka ukuthi ashiye izipho zakhe.
Izimakethe zikaKhisimusi nemihlobiso eNetherlands
I-Amsterdam ngesikhathi sikaKhisimusi
Kusukela ngoSanta Nicholas Day (Disemba 6) kuya kuKhisimusi, imigwaqo yamadolobha amakhulu agcwele amalambu nemihlobiso. Njengoba amadolobha amaningi aseDashi ahlanganiswe nawo iziteshi, ukukhanya kubonakala emanzini ayo ngakho lokhu kukhanya kuhle kakhulu.
Ezindlini kuyisiko ukugibela isihlahla sikaKhisimusi bese ubeka amalambu nezinye izinto zokuhlobisa eminyango, emawindini nasezingxenyeni ezingaphambili. Umndeni nabangane bashintshana ngokuhalalisela ababhala kukho I-kerst enhle (Merry Christmas ngesiDashi). Ngokwesiko, usuku olwandulela uKhisimusi nosuku lukaKhisimusi kufanele lubungazwe ekhaya, nomndeni.
Esikhundleni salokho, ngoDisemba 26 (Tweede Kerstdag noma "usuku lwesibili lukaKhisimusi") kuvame ukunikezelwa ukuvakashela umndeni okude kakhulu noma ukuya Ukuthenga kukaKhisimusi, ngoba cishe zonke izitolo zivuliwe ngalolo suku.
I-Los Izimakethe zikaKhisimusi eHolland zinhle kakhulu futhi ziyiqiniso emadolobheni amancane kunasemakhulu. Okunye okuhle kakhulu yikho okuhlelwe ngaphakathi Haarlem y Dordrecht, enezindawo zayo ezinkulu zeqhwa kanye nezitebele zomgwaqo zokhuni lapho unganambitha khona iwayini elinemilile. Ukukhulunywa okukhethekile ngemakethe kaKhisimusi ku IValkenburg, maphakathi nezwe, efakwe kwemihume ethile engaphansi komhlaba, noma emakethe entantayo ye Leiden.
Amasiko amaDashi ngoKhisimusi etafuleni
Gourmetten emaDineni kaKhisimusi waseDashi
Yize i-gastronomy yaseDashi ingaziwa umhlaba wonke, ukudla kwendabuko kukaKhisimusi kunikeza izibiliboco ezithokozisayo okufanele uzifunde.
Kunesiko lakudala elibizwa ngokuthi I-Gourmetten okuqukethe ukubeka isitofu esincane etafuleni ngoSuku lukaKhisimusi (olubizwa ngokuthi U-Eerste Kerstdag noma "usuku lokuqala lukaKhisimusi"). Ama-diners abuthana eduze kwalesi sitofu lapho izibiliboco zifudunyezwa ezingxenyeni ezincane, ngamunye esebenzisa ithileyi lakhe. Ungasho ukuthi kunjalo okuthile okufana ne-raclette yaseFrance.
Esidlweni sikaKhisimusi eHolland awukwazi ukuphuthelwa inyama eyosiwe (inyama yenkomo, idada, i-pheasant ...) ihambisane kahle nokuhlukile imifino nososo. Vele, izinhlobo ezahlukahlukene ze Ushizi waseDashi. Ngokuqondene nesiphuzo, yize kuleli kuphuzwa ubhiya omningi kunewayini, lesi sakamuva yiso esikhethwa yisidlo sasemini noma sakusihlwa salolu hlobo.
Ngemuva kwesidlo sasemini noma sedina, kufika uphudingi. Isikhathi sokunambitha i- I-Banketletter, amanye amakhukhi we-marzipan enziwe ngokuma kwezinhlamvu. Imvamisa ziphekwa ekhaya kusetshenziswa izinhlamvu zokuqala zamalungu ahlukene omndeni. Enye inketho emnandi yi- I-Pepernoot, isinamoni elimnandi nekhekhe lesinongo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Amasiko aseDashi ngoKhisimusi
Limeleni ifulege laseGrisi?